Ukuphupha amagwebu Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Iphupha lamagwebu. Kule nqaku uza kufumana ulwazi olubalulekileyo malunga nokuchazwa kwephupha.
Igwebu yinto enomdla ebantwaneni kuba isetyenziselwa ukwenza izinto. Oku kudala iintaba zegwebu okanye iindevu ebusweni nokunye okuninzi. Ibhafu yokuhlambela ikwalithuba elihle lokuba abantu abadala baphumle.
I-lather ayenzelwanga kuphela xa uhlamba, kodwa iyanceda naxa utsheva ukuze iblade igudle ulusu kwaye ithintele ukwenzakala. Kumatheko "amagwebu" akhethekileyo, amagwebu ongezelelweyo athatyathwa koomatshini ukubonelela ngomtsalane okhethekileyo kuluntu oluthandayo iqela. Iwayini ehlwahlwazayo ligama elisetyenziselwa ukuchaza iziselo ezisezibhotileni, eziqukethe iwayini kwaye ziqulathe ikhabhon diokside, oko kukuthi, inegesi.
Kodwa yintoni intsingiselo yegwebu ephupheni? Ngaba sikhe sayibona ibhabhu yebhafu ngenxa yokuba sifuna ukuzonwabisa kwakhona? Okanye ngaba amagwebu avela kwimeko eyahlukileyo ngokupheleleyo, mhlawumbi njengesicima mlilo? Yintoni eyaziwayo ngokutolika ngephupha ngale nto?
1 Uphawu lwephupha «amagwebu» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «amagwebu» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «amagwebu» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «amagwebu» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha kubona kwisimboli yephupha «igwebu» ikakhulu njenge isilumkiso. Umphuphi kufuneka athembeke kuye kubomi bemihla ngemihla kwaye angazixokisi. Kungenxa yokuba ukuba awuyi kujongana nenyani, kuyakufuneka ujongane neziphumo ngelinye ixesha, ezingayi kuba mnandi.
Kwakhona, iphupha kufuneka liboniswe ngephupha le-foam lokuba kubomi bemihla ngemihla kukho into ebonakala inkulu kwaye ingcono kunokuba injalo. Ukuphupha kufuneka kujonge ngasemva kwe-facade yale nto okanye lomntu. Kungenxa yokuba kulapho kuphela onokuyazi inyani.
Igwebu njengophawu lwephupha linokubhekisa kwi ukungoneliseki. Kuba nangona sele ephumelele okuninzi kwi el mundo, awonelisekanga yiyo kwaye uphinda-phinda iiprojekthi ezinobungozi kunye nokuzama.
Ukongeza, isimboli sephupha "legwebu" silumkisa ngabahlobo bobuxoki okanye abaqhayisayo abafuna ukukwenzakalisa. Ke ngoko, kuya kufuneka ujonge ngononophelo kwindalo yakho ebomini ukufumana aba bantu. Olu toliko lunokusetyenziswa kwakhona ukuba isilwanyana sinogwebu kwisicheme ngenxa yomgada xa ulele.
Abo batya igwebu kumaphupha abo kungekudala baya kumenyelwa eholideyini. Unokujonga ixesha lokuphumla kwinkampani emnandi kunye neyonwabisayo.
Uphawu lwephupha «amagwebu» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lokuchazwa kwephupha, igwebu njengophawu lwephupha lunokuba sisikhokelo kwabanye ukuziqhayisa. Lo mntu uqhayisayo ufuna ukubakhanyisela abanye abantu kwaye ke ngoko ukujongana naye kufuneka kubonakaliswe ngokulumkisa nokumodareyitha.
Ngamanye amaxesha, olu toliko lukwanxulumene nokuphupha uqobo, olubonisa abanye abantu into kubomi babo bemihla ngemihla. Ukuba kunjalo, kufuneka ucinge nzulu malunga nokuziphatha kwakhe kwaye ufumane unobangela. Kuba, ekuhambeni kwexesha, isimilo esinjalo sinokuba nefuthe elibi ebomini.
Ukulala kubaluleke ngakumbi xa ubona ulwandle olunogwebu okanye wehla emhlabeni. Ngenxa yokuba eli phupha likhumbula umfanekiso ovela kwiintsomi apho uAphrodite kubhekiswa kuye njengowasetyhini ozelwe kwigwebu eliphuma elwandle. Iphupha elo liphawulwa liphupha elinokuthi libe nempumelelo kwinqanaba lobomi elisandula ukuqalwa.
Uphawu lwephupha «amagwebu» - ukutolika kokomoya
Ukusuka kwindawo yokomoya, uphawu lwephupha «igwebu» libhekisa ukudlula kuyo yonke into esemhlabeni. Ke ngoko, umphuphi kufuneka aqonde ngephupha lakhe ukuba naye unobomi obulinganiselweyo.